भरतपुर मनपाबारे यी तथ्य हेर्नुस्, जसले तालमेललाई औचित्यहिन देखाउँछ - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
भरतपुर मनपाबारे यी तथ्य हेर्नुस्, जसले तालमेललाई औचित्यहिन देखाउँछ
प्रकाशित मिति : मङ्लबार, जेष्ठ २, २०७४
१. कांग्रेसको करिब ४० प्रतिशत मत मेयरमा रेणु दाहाललाई नै गएको छ । वडा अध्यक्षमा माओवादीको ३३८ मत र कांग्रेसको ६११ मत छ । वडा अध्यक्षमा माओवादीको ३३८ मत हुँदा मेयरमा रेणु दाहालको मत ६०५ पुग्नु करिब ४० प्रतिशत ९२६८ मत कांग्रेसकै हो ।
२. कांग्रेसको १५९ मत मेयरमा एमालेलाई गएको छ । एमालेका वडा अध्यक्षको मत ६०२ हुँदा मेयरमा ७६१ मत छ । ६०२ एमालेको प्यानल भोट मान्दा बाँकी कांग्रेसकै भोट तानेको प्रष्ट छ ।
३. कांग्रेसको १८४ मत मेयरमा की त कसैमा नपरेको, की रुखमै परेको कि त बदर भएको हुनुपर्छ । कांग्रेसका वडा अध्यक्षको मत ६११ लाई आधार मान्दा मेयरमा २६८ माओवादीलाई १५९ मत एमालेलाई गएको हुँदा बाँकी १८४ मत खेर गएको देखिन्छ ।
र, अर्को तथ्य
उपमेयरमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई माओवादीको १२९ मतमात्रै गएको देखिन्छ । कांग्रेसको वडा अध्यक्षमा ६११ मत हुँदा उपमेयरमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई थप १२९ मतमात्रै पाएको देखिन्छ । माओवादीका वडा अध्यक्षका उम्मेदवारले ३३८ मत पाएकोलाई आधार मान्दा माओवादीको बाँकी २०९ भोट की हसिया हथौडामा परेका, की कतै नपरेको की त बदर भएको हुनुपर्छ ।
यी तथ्यहरुलाई हेर्दा भरतपुर मनपाको नतिजा भन्न त सकिदै नै तालमेलको परिणाम नदेखिने सम्भावना छ । भरतपुरको मात्रै होइन अन्य स्थानीय तहमा पनि यस्तै समस्या भएको हुनुपर्छ । यसले प्रश्न उठाउँछ तालमेल किन ?